Sawirqaadeyaasha ma laha hal-abuurnimo? - Gofumed
Sawirqaadeyaasha ma laha hal-abuurnimo?
Nofeembar, 2007 GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley
Waxay u muuqataa in karti-qorayaashu aysan ahayn kaliya naqshadeeyayaasha sawir-gacmeedyada xun lakiin sidoo kale ka-shaqeeyayaasha xun. Labada tusaale ee kiiska kala cayncayn ah in ay version 7 waxay u muuqataa in ay isticmaaleen qaar ka mid ah shaashadaha daaqadaha iyo waxa kaliya oo beddelay midabada. Waxa xun ayaa ah inay sidoo kale sameeyeen Titans of Tennessee
Kiiska Microstation brand of Bentley SystemsIn ay version 8 isticmaali image shirkadaha asal ahan sida V8, sida :) daryaa casiirka, iyadoo farqiga u ah in V8 ma aha clip ah, waa summad ka diiwaan of daryaa.
Post Previous«Previous Qariiradaha Muusikada, Muusikada ugu sareysa ee dalka
Post Next Blog Ingenieria.com ayaa ku dhashayNext »
4 Jawaabaha "Kartoomiyayaashu ma laha hal-abuurnimo?"
Way fiicantahay in la qirto, wax xun maaha in loo wakiisho oo raba in ay wax walba sameeyaan
haa isagu wuxuu leeyahay:
Wixii aan ka nahay sawir qaadayaasha oo aan si sax ah u naqshadeeynayo garaafka, suuq-geynta iyo dhammaadka ....
Sidaas haa, qiyaasi in horumarinta qaadan maalmood oo dhan ka dambeeya code for qaadashada codsi adag, iyo suuq-abuur leh (haddii ay qabaan) waxa ay qaadataa laba saacadood in laga sameeyo sanam shirkadaha
Nin, halkii uu ku eedayn lahaa sawir qaadayaasha, wuxuu ku tuuri lahaa waaxda suuq-geynta ee garrafón in astaamahaas la shaqeeyay, in kasta oo kan labaad lagu qasbay (v8 wuxuu umuuqdaa mid taariikhi ah inuu ka fekero khiyaano) kii ugu horreeyay wuxuu ka yimid buug 😛